2013 ~ Zawlin IT World
DxO ViewPoint 2.1.0 Build 14 (64 bit) (Patch MPT) (227 Mb)
9:04 PM PC Softwares No comments
ဒီဆော့ဝဲလေးက ရှာရခက်သလို သိသူလဲနဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ် ဆော့ဝဲတွေထဲ မှာ အတော်လေးကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲ တခုပါ။ ဓါတ်ပုံထဲက ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာ(Object Place) တခုကို ပုံကြီးချဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး Crop,Colour, Effect တွေနဲ့ Edit and Save လုပ်ယူနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး တခုပါ။
-Crack ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_DxO \_ViewPoint မှာ copy လုပ်ပါ။
-၎င်း Crack ကို run လိုက်ပြီး cracked လုပ်ပါ။
Windows Vista/7/8 (64-Bit Only)
လိုင်စင်သက်တမ်း ၈၂-နှစ်(ရက်ပေါင်း-၂၉၉၇ဝ) ရတဲ့ Avast Antivirus 9-2014-Final+Serial-2095
8:51 PM PC Softwares No comments
အရင်တုန်းကလဲး ကောင်လေးရဲ့ ဆိုဒ်မှာ ဒီဆော့ဝဲလေးကို တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုံးက ကီးမထွက်လာသေးတဲ့အတွက် နာမည်၊ အီးမေးလ် ထည့်ပြီး Register လုပ်ကာ ၁-နှစ်သုံးနိုင်ကြောင်း တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲဒီ ဗားရှင်းလေးအတွက် ကီးထွက်လာပါပြီ။ လိုင်စင်ကီးရဲ့ သက်တမ်းက မယုံနိုင်လောက် အောင် ၂၀၉၅-ခုနှစ်(၈၂-နှစ်နီးပါး-ရက်ပေါင်း၂၉၉၇ဝ) အထိရပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲကို အင်စတောလုပ်ထားသူများ အသစ်ပြန်အင်စတောစရာမလိုပါ။ ကီးထည့်ရုံပါ။
-Avast Setup ကိုအင်စတောလုပ်ပါ။
-Update နဲ့ Scanning ကို ပြီးအောင်ခဏစောင့်ပါ။
-ပြီးရင် Avast ကိုဖွင့်ပြီး Setting>>Registration>>Off line Registration>>Insert License Key ..မှာ အောက်က ကီးကိုထည့်လိုက်ပါ။
-သက်တမ်း ရက်ပေါင်း ၂၉၉၇ဝ ဆိုပြီးတွေ့ရပါမယ်။
ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေ ယူနိုင်တဲ့ Auslogics File Recovery v4.3.0.0 Incl Crack (6.11 Mb)
11:08 PM PC Softwares No comments
စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့၊အသုံးပြုနေတဲ့ Hard Disk အမျိုးမျိုး၊USB Flash Drives များ၊Memory SD Cards များမှ ဖိုင်မှန်သမျှကို Recovery and Backup ပြန်လုပ်ယူနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်သေးပေမဲ့ အလုပ်လုပ်တာ မြန်သလို သပ်လဲသပ်ရပ် ပါတယ်။
Setup ကိုအင်စတောလုပ်ပါ။ ဆော့ဝဲကို မဖွင့်ပါနဲ့။ Crack ဖြစ်တဲ့ "rtl160.bpl" ဖိုင်လေးကို C:\_Program Files\_Auslogics\_File Recovery\_ မှာ copy and paste လုပ်ပါ။
OS =Windows XP/Vista/7/8
အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်းကောင်းကောင်း ရပြီး စက်ကို မြန်စေတဲ့ Auslogics BoostSpeed v6.3.0.0 Incl Crack (17.1 Mb)
ကွန်ပြူတာရဲ့ Performance အားလုံးကို ရှာဖွေ Fix လုပ်ပေးပြီး အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်းကိုလဲ မြန်စေတဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ။ Clean,Fix and Speed Up လုပ်ပေးတဲ့အတွက် စက်က အရမ်းနှေးနေရင်၊ လေးနေရင် ဒီဆော့ဝဲ လေးကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Setup ကိုအင်စတောလုပ်ပါ။ ဆော့ဝဲကို မဖွင့်ပါနဲ့။ Exit ပြန်လုပ်ထားပါ။ "rtl160.bpl" ဆိုတဲ့ Crack ဖိုင်လေးကို C:\_Program Files\_Auslogics\_BoostSpeed\_ မှာ copy and Paste လုပ်ပါ။ ပြီးရင်ဆော့ဝဲကို ဖွင့်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ။ Windows XP/Vista/7/8 စတာတွေမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Update ဖြစ်ပြီးသား PC အတွက် အကောင်းဆုံး Web Browser (10) ခု
1:31 AM PC Softwares No comments
ကွန်ပြူတာမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအသစ်များနဲ့ အကောင်းဆုံး Web Browsers (၁၀) ခုကို တစုတစည်းထဲ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ Browser ကိုအလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Download Direct Link ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။လူသုံးအများဆုံး၊လူကြိုက်အများဆုံး Browsers များဖြစ် ပါတယ်။ လိုချင်တာကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
(1) IE Browser 11 Download Link
(2)Firefox 25.0 Beta6Download Link
(3)Google Chrome 32.0.1664.3 Dev Download Link
(4)Maxthon Cloud Browser 4.1.3.1200 Beta Download Link
(5)Netscape 9.0.0.6 Download Link
(6)Avant Browser 2013 build 118, 9.23.2013 Download Link
(7)Opera 17.0.1241.45 Download Link
(8)Apple Safari 5.1.7 Download Link
(9)Play Free Browser Download Link
(10)UC Browser Download Link
11:37 PM PC Softwares No comments
DVD အခွေများကို Copy လုပ်ဘို့၊Convert လုပ်ဘို့ ဆော့ဝဲလေးပါ။DVD toDVD copy လုပ်လို့ရသလို အဲဒီ DVD အခွေမှ Video များကို MP4, MKV, M4V, AVI,iPod, iPhone, iPad, Xbox 360, Android devices,...formats များကို rip ,convert လဲ လုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတခုပါ။ Setup ကို အင်စတောလုပ်ပြီး ပေးထားတဲ့ Serial ကီးကိုထည့်ပါ။
Download>>>>> Any DVD Cloner Platinum
9:35 PM PC Softwares No comments
ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသေးလေးနဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းမျိုးစုံ အပုဒ်ရေပါင်း များစွာကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးပြီး အလွယ်တကူနားထောင်နိုင်တဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ Online Radio ဆော့ဝဲလေးတခုပါ။ Classic,Country,Jazz,Pop,Rock,Hip Hop,Blue..စတဲ့ သီချင်းအားလုံးကြိုက်ရာကို Select လုပ်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ ရေဒီယိုကို ဖွင့်ပြီးနားထောင်နိုင်ပါပြီ။
Download >>>>> Radio Tuna
ရုပ်ပြဆွဲချင် သူများအတွက် Comic Life 2.2.7 Windows (crack) (84.2 Mb)
9:17 PM PC Softwares No comments
မင်္ဂလာပါ... ကျွန်တော်က ဒီဆိုဒ်လေးရဲ့ Author အသစ်ပါ...။ကျွန်တော့ နည်းပညာလေး တွေမျှဝေခွင့်ရလို့ လဲး ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဆိုဒ် Admin ကို ဇော်လင်းကို လဲးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တောလဲး လေ့လာနေဆဲး ဖြစ်လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ခုဆော့ဝဲးလေးတစ် ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Design,Effect များစွာနဲ့ 3D,2D ရုပ်ပြများကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။နောက်ပြီး ရုပ်ပြများ၊ ရုပ်ပုံများကိုလဲ လိုအပ်သလို Edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Setup ကို အင်စတော လုပ်ပါ။ ဆော့ဝဲကို မဖွင့်ပါနဲ့။ Crack ဖိုင်ကို C\_Program Files\_Comic Life\_ မှာ copy and paste လုပ်ပါ။
OS =Windows XP/Vist/7/8
Download>>>>> Comic Life
3:01 AM Online ငွေရှာနည်း No comments
PayPal အကောက်ကို Verify ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဆိုရင် အရင်က ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို VisaCard တို့ Master card တို့ လိုအပ်ပါတယ် ကျွန်တော်က အခု ထိုင်းမှာ နေတဲ့ အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံက ကဒ်တွေကို အခြေခံပြီး ပြောပြပေးသွားပါမယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ ထိုင်းဘဏ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ K-Bank မှာ VISA card တစ်ခု ကျွန်တော့် နာမည်နဲ့ လုပ်လိုက်ပါတယ် ..။ ရိုးရိုးက ဘတ် ၃၀၀ အာမခံနဲ့က ဘတ် ၈၀၀ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ကဒ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း အင်တာနက်မှာ သုံးလို့ မရသေးပါဘူး အင်တာနက်မှာ သုံးလို့ ရဖို့အတွက် Bank service ထဲဝင်ပြီးတော့ internet shopping ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ နိုင်ငံကြီး တော်တော် များများမှာတော့ ပြန်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ပြန်လုပ်ရပါတယ်..။
VISA Card ရလာပြီး ဆိုတာနဲ့ အရင်ဦးဆုံး မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘဏ်ရဲ့ ATM ပုံးကို သွားလိုက်ပါ ..။
လမ်းဘေးတော်တော်များများမှာ ရှိပါတယ်.. ။ ကဒ်လုပ်ပေးတဲ့ ဘဏ်ရုံး အရှေ့မှာလဲ ရှိပါတယ်..။ ရောက်ရှိသွားပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ VISA card ကို ATM ပုံးထဲ ထည့်လိုက်ပါ..။
ကိုယ့်ရဲ့ Phone No ကို ထည့်ပြီးပါက Submit Mobile No ကို နှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးသွားရင် စာရွက် တစ်ရွက်ထွက်လာပါမယ် .. အဲ့ဒီ စာရွက်မှာ ဂဏန်းလေးလုံး ပါရှိပါတယ် မှတ်ထားလိုက်ပါ..။ စောစောက ထည့်ခဲ့တဲ့ Phone No ကိုလဲ စာအိပ် တစ်လုံး Bank ကနေပြီးတော့ ပို့ပေးပါမယ်..။ စာရွက်ထဲကလိုဘဲ ဂဏန်းလေးလုံးပါပါတယ်..။
ကဲ.. အကောက် Login ဝင်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ..။အကောက်ထဲ ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း ညာဘက်ဘေးနားက Link debit/credit card ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ..။
Card Number , Expiry Date,Card Security Code. စသည်တို့ကို ဖြည့်ပေးရပါမယ်..။
အရင်ဦးဆုံး Card Number နေရာမှာ အောက်ကပုံအတိုင်း ကဒ်က နံပါတ်ကို ကြည့်ပြီး ရေးလိုက်ပါ..။
Expiry Date ကိုလဲ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းဘဲ ကြည့်ပြီး ရေးလိုက်ပါ..။
အဲ့ဒီ ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။ အနီတန်းနဲ့ ဖြတ်ထားတာက ကျွန်တော့် No ဖြစ်နေလို့ပါ။Confirm My Card ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
အဲ့ဒီ ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်..။ ကျွန်တော်တို့ စောစောက ATM ပုံမှာ ထည့်ခဲ့တဲ့ Phone No ထဲကို Bank ကနေပြီးတော့ စာအိပ်တစ်လုံး ပို့လာပါမယ်..။ PayPal ကနေပြီးတော့ ဝန်ဆောင်ခ ထိုင်း ဘတ် 32.36 နုတ်သားပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပါ.
ဘတ် 70 ထပ်နုတ်ပါတယ်..။ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း အဲ့ဒီ ဘတ် 70 ကို PayPal အကောက်ထဲသို့ ပြန်ထည့်ပေးပါတယ်
Enter PayPal Code ကို နှိပ်လိုက်ပါက အပေါ်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ် ..။ စောစောက ဖုန်းထဲကို ပို့လာတဲ့ PP* ဘေးက No လေးလုံးကို ထည့်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင် Confirn Card ဆက်နှိပ်ပါ..။
အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ။ :D လက်ခုပ်တီးကြပါ ခင်ဗျာ..။ :D
Close ကို နှိပ်လိုက်ပါ..။
:D ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် ...
ကဲ PayPal အကောက်ရပြီ ဆိုရင် အင်တာနက်မှာ ငွေ ရှာချင်ရင် အောက်မှာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ..။
ဒီဆိုဒ်အကြောင်းကိုတော့ သိပ်ပြီးတော့ ရေးပြစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အွန်လိုင်း အလုပ်လုပ်တဲ့သူ တော်တော် များများ ဒီဆိုဒ်နဲ့ ကင်းဖူးတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ကြော်ငြာ ကလစ်ရာတွင်လဲ ရိုးရှင်း လွယ်ကူပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာ လွယ်ကူအောင် ကျွန်တော့် ဆိုဒ်မှာ မြန်မာလို အသေးစိပ် ရေးပြထားပါတယ်။ ဒီမှာ လေ့လာပြီး ဒီမှာ Register လုပ်လိုက်ပါဗျာ။
ဆိုဒ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်..။ အပေါ်ဆုံးက The Bux နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံချင်း တူပါတယ်..။ အဲ့ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ..။ အမှန်တကယ် ငွေထုတ်လို့ ရပြီး အလုပ်လုပ်သင့်တဲ့ ဆိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီနေရာကနေ ကနေ Register လုပ်လိုက်ပါ..။ နောက်ထပ် တစ်ခုက သူ့မှာ ကံစမ်းမဲ နှိုက်ဖို့ မရှိပါဘူး..။ ကံစမ်းမဲ မနှိုက်ချင်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာပေါ့..။
ဒီဆိုဒ်က ငွေပေးများတာကြောင့် နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ သူက ကြော်ငြာနှိပ်ရတာ အရမ်းများပါတယ် ။ ကြော်ငြာများတဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံလဲ များများ ပေးပါတယ် ။ referrals တွေလဲ ဈေးချိုပါတယ် ။ အလုပ်လုပ်သင့်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ မန်ဘာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ဝင်လိုက်ပါ။
ဒီဆိုဒ်က အသစ်ပါ ..။ ဝမ်းသာစရာတစ်ခုက သူ့မှာကြော်ငြာ ကလစ်ရတာ တခြားဆိုဒ်တွေမှာလို ကြော်ငြာအသေး (0.001တန်) လုံးဝမပါပါဘူး..။
လုံးဝရှင်းပါတယ် .. ကြော်ငြာအကြီး ၅ခု ၆ခု ဘဲ ပေးပါတယ်..။ $0.06 ဖိုးပါ ..။
နောက်ထပ် တစ်ခုက သူ့မှာ ကံစမ်းမဲ နှိုက်ဖို့ မရှိပါဘူး..။ ကံစမ်းမဲ မနှိုက်ချင်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာပေါ့..။
ဒီမှာ Register လုပ်လိုက်ပါ..။
ဆိုဒ်တွေ အများကြီး လိုက်လုပ်နေမဲ့ အစား သေချာတဲ့ ဆိုဒ်သုံးလေးခုကိုဘဲ ရွေးပြီးလုပ်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် နောက်ပိုင်း ရှယ်ယာတွေ များလာပါက ရှယ်ယာတွေ ဂရုစိုက်ဖို့လဲ အချိန်လိုတဲ့ အတွက် သေချာတဲ့ ဆိုဒ်တွေကိုဘဲ ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ကြပါဗျာ ။ Facebook ပေါ်မှာ ဆွေးနွေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Facebook Group >> Myanmar PTC Helper (အွန်လိုင်းငွေရှာသူများ) Group သို့ ဆက်သွယ်ကြပါဗျာ။
လိုအပ်သောအကူအညီနှင့် မရှင်းလင်းတာတွေရှိရင် Facebook account နှင့် Facebook Page သို့ အားမနာတန်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။